Ngonongonom-bahoaka Ao Kambodza taorian’ny “Namotsian’ny” Ben’ny Tanàna Ny Hosodokon’ny Mpanakanto Iray Avy ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2015 5:13 GMT
Pikatsarin'ny lahatsary mampiseho ny fomba nametahan'ny mpanakanto ny hosodoko tao Phnom Penh talohan'ny namafan'ny manampahefana Kambodziana azy.
Nitsikera mafy ny fanapahan-kevitry ny kaominin'i Phnom Penh hamafa ny hosodoko lehibe iray nolokoina teo amin'ny tranobe fonenana fantatra amin'ny hoe Tranobe Fotsy ny mpiserasera Kambodziana, anisan'izany koa ny minisitry ny fampahalalam-baovao ao amin'ny firenena, voalaza fa tsy nahazo fahazoan-dalana avy amin'ny Lapan'ny Tanàna ny fametahana ny hosodoko.
Voakasika ny mpanakanato an-dalambe taorian'ny korontana momba ny hosodoko tao amin'ny Tranobe Fotsy tao Kambodza
Nataon'ilay Amerikana Miles MacGregor, fantatra amin'ny anarana hoe El Mac ny hosodoko, izay anisan'ny Tetikasa Igloo Hong mikendry hanohana ny asan'ny mpanakanto manerana izao tontolo izao. Amin'ny fandraisany anjara, nanoratra tao amin'ny bilaoginy i El Mac fa ny tetikasany Kambodziana dia atolony ho an'ireo mpanakanto lavo nandritra ny fitondran'i Khmer Rouge tamin'ny taompolo 1970:
Manome voninahitra ny mpanakanto ao Kambodza ity hosodoko ity, na ny ankehitriny na ireo nanjavona nandritra ny fandripahana ny Kambodziana nandritra ny tapaky ny taompolo 1970, izay lasibatra sy novonoin'ny fitondrana ny ankamaroan'ny vahoaka tia mamorona ao amin'ny firenena .
Nahatsiaro nanana tombotsoa izy satria holokoina eo amin'ny tranobe fonenan'ireo mpanao asa tanana sy mpanakanto maro ankehitriny ny hosodoko:
Hatramin'ny nahafahako nandoko ny rindrina lehibe sy hita maso ao amin'ny toerana izay toa tsy ahitana hosodoko goavana hafa tahaka ity, nahatsiaro nanana andraikitra hafa aho mba handoko zavatra mahafinaritra, misy dikany, ary mankahery.
Manantena aho fa azo atao fanomezam-boninahitra sy fanajana ny maha zava-dehibe sy ny faharetan'ny lovan'ny famoronana ao Kambodza ity hosodoko ity, ary koa, amin'ny fomba kely hafa, manolotra aingam-panahy ho an'ny mpanakanto tanora Kambodziana mba hanohana ity lovantsofina ity.
Miha-vitsy ny asa tanana ataon'olo-tsotra tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, indray andro tao Kambodza raha mandehandeha manerana ny tafon'ity tranobe fonenana ity izahay mitady toerana holokoina no nahatsikaritra ity zavatra tsy fahita ity dia vehivavy iray nanana tsihy eo ivelan'ny tafo tanimanga vakivaky sy lasitra mainty miparitaka, teo am-panjairana lamba fitafy tena sarotra indrindra eo akaikin'ny antontan-tanimanga nolokoina toy ny #batman izy, niresaka taminy izahay ary navelany nandoko ny ivelan'ny trano fonenany, novidiako ho an'ny reniko ilay lamba fitafy, heveriko fa olona 2 sisa no manao izany karazana asa tanana fanjairana izany ao #phnompenh, mampiasa lakaoly mafana ny rehetra ambiny, na izany aza, efa antitra ny tranobe ary tsy mbola nohavaozina nanomboka ny taona 1950, ka nanatontosa ity sarim-behivavy nanjaitra ilay lamba fitafy ity i @mac_arte, teo amin'ny sisin'ny trano fonenany ka afaka mahita izany isan'andro izy sy ny hafa rehetra, manaja ny asa tanany sy manome voninahitra ny asa mafy ataony izahay
Iray amin'ireo mpiasa ara-kolontsaina monina ao amin'ny tranobe i Moeun Thary, mpanjaitra an-tanana ny akanjo nentim-paharazana Khmer. Nisafidy an'i Moeun Thary i El Mac ho lohahevitra amin'ny hosodokony ho fanomezam-boninahitra ny zavatra ataon'ity vehivavy ity izay miaro sy mampiroborobo ny kolontsaina Khmer nentim-paharazana.
Jereo ny hatsarany…
Indrisy, nanome baiko avy hatrany ny hanaisorana ny hosodoko ny lapan'ny tanàna satria voalaza fa nanomboka nandoko ny rindrina i El Mac sy ny ekipany raha mbola teo am-pandinihana ny fangatahan'izy ireo hanatontosa izany. Nilaza ihany koa ny mpitondra ny sampan-draharaha ao an-toerana fa tsy nahazo fankatoavana ny fangatahana satria tsy vita tao anatin'ny fomban-drazana Khmer ny hosodoko no sady tsy fantatra tsara ihany koa ny foto-kevitra (Moeun Thary). Nanoro hevitra ny mpanakanto ny manampahefana mba hampiseho ny maherifo Khmer ho solon'izany.
Nosoloin'ny kaominina tamin'ny rakotra mikorontana ny hosodokon'ilay mpanakanto malaza iraisampirenena
Ary fantatra fa toa “nanafotsy” ireo tetikasa ara-java-kanto hafa ihany koa ny Lapan'ny tanàna:
Kanto an-dalambe tao amin'ny Lalana 830 no nofafan'ny mpanakanto nankatoavin'ny governemanta ao Kambodza.
Nahatezitra ny maro nankasitraka ny asan'i El Mac ny fanafotsiana ilay hosodoko. Na ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao, Khieu Kanharith aza mba nandrisika ny governemanta ao an-toerana mba hidera ilay mpanakanto fa tsy hanaisotra ny hosodokony
Naneho hevitra ny maro tamin'ny mpiserasera aterineto fa feno takela-dokambarotra lehibe momba ny zava-pisotro misy alikaola ao Phnom Penh kanefa tsy nesorin'ny governemanta ao an-toerana ireo. Ny sasany aza nilaza mihitsy fa tokony nanisy sarina labiera tao amin'ny hosodoko i El Mac mba tsy ho fafan'ny manam-pahefana izany.
Tao amin'ny Facebook, nosokajian'ny Graffiti Cambodia ho fanafihana ny zavakantom-bahoaka ny fihetsiky ny governemanta:
Mandefa hafatra mazava ny governemanta Kambojiana fa tsy ho leferina ny zavakanto-bahoaka. Na izany na rorain'izy ireo fotsiny amin'ny fomba mahatrotraka indrindra azo atao ny sarin'olon'izy ireo (mpanakanto).
Mandritra izany fotoana izany, hafa ny hevitr'ilay mpikarakara ny Fetiben'ny Kanto Andrenivohitra Kambodijiana, Theo Vallier:
…Amin'ny lafiny iray, tsy mankasitraka ny zavatra nataon'ny Lapan'ny tanàna aho satria zavakanto sy zava-drehetra io, saingy amin'ny lafiny iray hafa, tsy nahazo fahazoan-dàlana izy ireo. Efa ela ihany aho no tao Kambodza ary mahafantatra tsara ny fitsipika eto, ary tena miezaka manaja ny fitsipika isika eto.
Na dia tsy eo intsony aza ny hosodoko, velona ao amin'ny YouTube izy: